Sexy sibalo: zendlela yokwenza sexy sibalo?
Izindaba Umphakathi, Nezindaba zabesifazane
Ezocansi - iyisikhali njengabesifazane usebenza ngokuphelele. Abesilisa njalo uqaphela intombazane sexy ngisho noma ubuso bakhe akukho ubuhle ezahlukene ukuhamba ekuseni. Abaningi izinkanyezi lanamuhla (ikakhulukazi actress kanye umculi), bombo sikude kakhulu nokuphelela, kuyaqapheleka uphawu ubulili kanye itoho ubuhle. Noma kunjalo, bayahlonishwa yizigidi. Zonke ndaba kwezocansi. Namuhla sibheka indlela yokwenza sibalo ngokobulili.
I enhle yobuhle
Kusukela 1910s, ekahle sibalo zesifazane kushintsha njalo eminyakeni eyishumi. Sasizigqokele vogue futhi roundness isifazane, futhi intombazane ephethe ukungabi khona amafomu, ngisho mncane ezibuhlungu.
Naphezu kweqiniso lokuthi ekahle wamanje ngobuhle kubhekwa sibalo 90-60-90, iningi lamadoda ungajabulile ngokuthi uphatheke amamodeli zamanje, omisiwe ukudla okunamafutha amaningi. Engqondweni madoda umfazi enhle nge amafomu ezifana Marilyn Monroe, uSalima Heyek ngisho Kim Kardashian. Laba besifazane ngempela sibalo okhanga.
Nokho, ingabe isikhungo hhayi kuphela sibalo yowesifazane sexy.
Okokuqala, kufanele uqaphele ngobulili babo besifazane nangekhono ukuyisebenzisa. It is othukuswe ubunjalo ngamunye wethu, kodwa amanye amantombazane kudingeka imizamo eziphathekayo ukuthola wakhe.
Yiziphi izinyathelo kuzosiza uzizwa sexier?
Underwear. Lingerie, naphezu ukusitheka yayo sobala, kubaluleke kakhulu ukuba nomuzwa wokuthi owesifazane. Khetha eliphezulu, nelineni amahle - ivuliwe lokho ngeke kukusize ngalutho ukonga. Ukuyembatha, uyozizwa ezahlukene. Sexy sibalo amantombazane ngigcizelele njalo ilineni ezifanele.
Heels. Ngisho noma ukuhambisa eziningi futhi awukwazi baphathe izikopelo omkhulu - lokhu akudingekile. Empeleni, kubalulekile yini ubude izithende uhambe! Abesilisa akuvamile uqaphela izicathulo zakho, ngokuvamile eshaya abesifazane Gait amahle. Carry izithende elincane noma platform esitebeleni.
Agqoke iziketi kanye izingubo. Uyakwazi ukukhetha ilungelo ingubo isitayela ezokwenza ukufihla amaphutha futhi bagcizelela isithunzi. Bheka isihloko kuyi-Internet noma ama-consultants ezitolo - bayokusiza ukukhetha izingubo ezifanele kakhulu.
Nakekela isikhumba sakho. Imiphumela Excellent bungatholakala nokusetshenziswa ungafundeki amafutha yemvelo (linseed, kakhukhunathi, umnqumo). Pamper ngokwakho ukugeza ngezinsalela uLwandle Lukasawoti, ungakhohlwa skrabirovat isikhumba futhi ngokuvamile uvakashela umbhucungi womzimba. Massage ikhuthaza ukugcwaliswa amandla owesifazane, ngaphezu izinzuzo esisobala emzimbeni.
Futhi ekugcineni, sengathi owesifazane! Beautiful, efiselekayo nokuthi uyatetema. Okokuqala, yazi ukuthi une sexy sibalo.
Figure - isici esibaluleke kunazo kwezocansi
Sexy sibalo kuhlale injabulo futhi isifiso. Phakathi naleso sikhathi, akuzona zonke intombazane ukuziqhayisa amafomu ekahle. Kungakhathaliseki uhlobo sibalo kungenzeka elakho, khumbula - ungaba sexy. Into esemqoka lapha - ukuthola ubuthakathaka babo futhi asuse ngekhono kubo.
A indima ebalulekile kulokhu isisindo esengeziwe. Iningi lamadoda ungajahi amantombazane Skinny kakhulu. Kukhona ngisho umbono umuntu sengqondo esivamile kufanele bathande abesifazane amafomu. Nokho, ngokuchichima isisindo okweqile kanye ngangokunokwenzeka ukubulala luzokhula ukholo lwakho ekutheni ubufazi akho kanye neziphathelene nezocansi. Ngoba kubalulekile ukubhekana naso.
Ezemidlalo - lahlotshaniswa nokuba ubulili
Thanda ezemidlalo futhi uthole fun. Ukuvivinya umzimba kuyokusiza ukukhomba labo izindawo kucatshangwa ukuthi ngokocansi - ukoma esifubeni nezinqe (engcono lapha ukusiza squats), ukususa izinhlangothi futhi isisu. Thola akho noma nge Umqeqeshi afaneleka kakhulu umsebenzi wakho, okuyinto kungakapheli masonto amangaki kakhulu akugucule. Ngesikhashana nje wena sexy sibalo izuzwe uma, ngaphezu ezemidlalo, unake ekudleni kwakho.
Ungahlala uzama ukwenza i-yoga. Kuvumela owesifazane ukuthola eguquguqukayo, umusa ukunyakaza futhi, ngaphezu kwakho konke, ukuthula nokuthula kwangaphakathi, okuyilona elidingekayo ukuze umuntu ngamunye kithi. Sexy sibalo njalo kwahambisana nesifazane.
Ngaphezu kwalokho, Umqeqeshi Tatiana Krotov ukholelwa ukuthi ukuqeqeshwa amandla kungasiza ukwehlisa fat umzimba bese ukwakha sexy ivolumu.
Ukuqeqesha amandla ka Tatyany Krotovoy:
Bopha ukushaqeka iqakala uSangweni yena ukususwa umlenze ukuze ohlangothini i-engela 45 degrees, uyibambe kulesi sikhundla.
Behleli ezinesisindo. Njengoba izinsimbi ingasetshenziswa dumbbells noma barbells.
Lunges imilenze ezinesisindo.
Ukuvivinya ngayinye wenziwa 3-4 amasethi. Vivinya umzimba njalo, 3-4 izikhathi ngesonto - futhi ngokushesha uzobe sexy sibalo! Yiqiniso, nomqeqeshi bayoba ephumelela kakhudlwana, kodwa uma ungakwazi ukuya ejimini - nomkhawulo yakho ukusebenzisa ekhaya. Okubaluleke kakhulu, kumele axoxisane injabulo isifiso. Ngemva Amazing, isimo semizwa yakho iyophinde bavuke.
Ukufunda ukudla ngendlela efanele
Enye ukuxhumana okubalulekile ukuthi ziyoba umzimba wakho uphilile, nemicabango - okumsulwa.
Ochwepheshe batusa ukushintshela uhlukanise ukudla, izikhathi 5-6 ngosuku, baphuze amanzi amaningi okumsulwa futhi, okubaluleke kakhulu, ukuqeda carbohydrate "lilihle", ezifana amnandi, ufulawa, imikhiqizo ngabhema. Bonke bangabangasokile carbohydrate ezingenalutho, hhayi ebizwa umzimba omuhle.
Yidla izithelo nemifino, okusanhlamvu, imikhiqizo yobisi, baphuze ayo fresh. Lezi amathiphu alula kuzokusiza unciphise umzimba futhi uthole isesimweni isheshe. Vele uthole ngokwakho ndawonye futhi sizilandele.
Ngaphandle nje kokusebenza emzimbeni wakhe, wasebenza emicabangweni yakhe. Zizwe a ubulili kanye ubufazi, benza aphume kimi ... futhi ziyobona kanye ezungezile. Sexy sibalo zesifazane njalo looker.
Can eyodwa umdlezane raspberry? Amathiphu namacebo
Incasiselo Triangle - sibalo nomsubathi noma intokazi njengabesifazane?
Kanjani ukubala usuku nge-ovulation. Kanjani ukubala ngokunembile ngosuku lokuqala ukukhiqizwa kwamaqanda
Isibalo engcono. The enhle kakhulu sibalo zesifazane
Amazinga Insane wobuhle emakhulwini eminyaka adlule, ukuba khona ongeke ukholwe
Oatmeal amakhukhi nge ibele: yebo noma cha
Umbhali Australian Liane Moriarty: Biography, izici namakhono ahlukahlukene, futhi uhlu lwezincwadi
Yini umfana iminyaka 10: amathiphu
"Influvac": yokusetshenziswa. "Influvac": ukubuyekezwa, umkhiqizi, usuku lokuphelelwa yisikhathi
Roza Lyuksemburg: impilo nokufa izinguquko
Amabha Amaphrotheni. Izibuyekezo nezici
KrAZ-255 - Ukucaciswa lobuchwepheshe. Kremenchug Automobile Plant
Yikuphi okungcono: egijima noma ukuhamba? Ukugijima nokuhamba
Indlela yokudoba inyama epikinikini